Komaandar Nagaraa Dhufeeraa fi Himatamtoonni Ka Biroon 9 Waajiira Polisii Isaan To’atee Jiru Himatan
Ebla 27, 2018
Oromiyaa keessatti aangawoonni bulchiinsa sadarka adda addaa fi itti gaafatamtoonni waajiraalee polisii akkasumas nageenyaa hidhamaa akka jiran jiraattonni ibsuu eega jalqabanii bubbulee jira.
Kanneen keessaa tokko kan ta’an ajajaan waajira polisii magaalaa Mattuu Komaandar Nagaraa Dhufeeraa eega to’annaa jala oolanii baatii lama guutuuf jiran. Garu haga ammaatti himannaan irratti dhiaate waan hin jirreef jecha dargaggoota isaan waliin to’annaa jala jiran sagal waliin waajiira polisii godinaa seeraan hiamatamanii jiru.
Manni murtiis ajaja waajiricha himatameef ergeen dhiyaatanii waa’ee kanaa akka ibsan xalayaa ajajaa ergee jira.Kunis har’a waaree booda kan ture yoo ta’u manni murtii bellama biraa kennuu isaa maatii keessaa nu ibsanii jiran.
Gama kaaniin bulchaan magaalaa Ciroo Obbo Xahaa Waaqoo bulchaan magaalaa Hirnaa Obbo Iskindir Ahmad Dirree Daawaa keessatti to’annaa jala akka jiran beekamee jira. Godiina Wallaggaa dhiyaa aanaa Bedii keessatti aangawaan nageenyaa itti anaa isaa waliin akkasumas itti gaafaamaan waajiira polisii Begii gidduu kana to’annaa jala oolfamuu jiraatonni ibsanii jiru.
Ajajaan polisii wallaggaa bahaa komaandar Caalii Tasammaa torban lama dura hidhaa kan gadhiifaman yoo ta’u barreessaa paartii Kongrasii Federaala Oromoo Obbo Baqqalaa Nagaa yeroo waggaa lama ta’uuf mana ofii keessatti uugguramanii eega turanii booda amma hojii paartii isaanii jalqabuu isaanii ibsanii jiru.
Barattoonni Yunivarsitii Amboo Har’a Hiriira Bahan
Ejensiin USA biyya alaatiin gargaartu, USAID raammoo midhaan Afrikaatti baafatte 'Fall armyworms ' diqqeessuf fala teknoolojiitti jira